Codsiyada Apple Watch | Wararka IPhone
Barnaamijyada Apple Watch
Wararka IPad | | Apple Watch, iPad
Apple Watch waxay lahaan doontaa buugaag badan oo codsiyo ah markay bilaabeyso iyadoo ay ugu wacan tahay dadaalka Apple iyo horumariyeyaasha maxaa yeelay taasi waa sidaas. Codsiyada ugu muhiimsan horeyba waxay u leeyihiin kordhintooda diyaarinta saacadda Apple, taas oo shaki la'aan noqon doonta mid ka mid ah xooggooda weyn iyo farqiga ugu weyn ee ka jira barnaamijyada kale ee la heli karo. Laakiin waxa ku saabsan codsiyada hooyo ee Apple Watch? ¿Maxaan ku sameyn karnaa iyada oo cusub sanduuqa? Waxaan ku tuseynaa codsiyada horay loogu sii rakibay Apple Watch iyo shaqooyinkooda.
1 Farriimaha, Telefoonka iyo Boostada
2 Jadwalka, Waxqabadka iyo Shaqada
3 Khariidadaha, Buug-gacmeedka iyo Siri
4 Muusikada, Kaamirada Remote iyo Remote
5 Waqtiga, Boorsada iyo Sawirada
6 Alaarmiga, saacadda saacadda saacadda iyo saacadda
7 Saacadda Dunida iyo Dejinta
Farriimaha, Telefoonka iyo Boostada
Saddexda tiir ee isgaarsiinta ee casriga ah ayaa ka muuqda Apple Watch. Kajawaabida wicitaanada taleefankaaga Apple Watch mahadsanidiisa kuhadalka iskujira iyo makarafoonka, diidida wicitaanka ama xitaa aamusinta adoo si fudud ugu daboolaya saacada hal gacan waa howlaha ay Apple Watch noo ogolaaneyso. Codsiga farriimaha ayaa noo oggolaan doona inaan aragno farriimaha, uga jawaab iyaga saacadda lafteeda adoo adeegsanaya amar ama cod fariin ah, ama xitaa dir emojis animated. Boostada ayaa yara yaraan doonta, waxayna noo ogolaan doontaa oo keliya inaan aqrino emayllada, aan xafidno, aan calaamadeyno ama u calaamadeyno sida wax loo akhriyey ama aan loo aqrin.
Jadwalka, Waxqabadka iyo Shaqada
Codsiga kalandarka ayaa kuu oggolaan doona inaad aragto ballamahaaga hadda iyo ballamaha soo socda. Waxaad ka heli doontaa ogeysiisyo mid kasta oo ka mid ah iyo marka aad hesho casuumaad, oo aad xitaa aqbali karto ama diidi karto Apple Watch. Firfircoonidu waa arjiga lagu kormeerayo waxaad qabatay maalintii oo dhan: dhaqdhaqaaqyada, xilliyada jimicsiga, iyo waqtiga aad taagnayd. Markaad fadhiday waqti dheer waxay ku xusuusin doontaa inaad kacdo. Jimicsiga waan u adeegsan doonnaa markaan jimicsiga sameyno, aan tusno xogta nool sida kalooriyada gubatay, masaafada loo socdaalay ama garaaca wadnahayaga. Waxaad kala dooran kartaa jimicsiyo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ugu badan: socodka, orodka iyo baaskiil wadista.
Khariidadaha, Buug-gacmeedka iyo Siri
Helitaanka jihooyinka aad u socoto way ka fududaan doontaa sidii hore weligood mahadnaqa Maps. Adiga oo ka bilaabaya xaalada aad hada kujirto waad awoodaa hel tilmaamo tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo tago meesha aad u socoto. Thanks to taajka, zooming waa mid aad u fudud. Passbook wuxuu ahaan doonaa kan kaydiya tigidhadaada, kaararka lagu raaco, iwm waxaadna awoodi doontaa inaad gasho bandhigyada iyo diyaaradaha adigoo adeegsanaya saacaddaada. Siri wuxuu doonayaa inuu ku dhasho Apple Watch. Helitaankeeda weyn ayaa fursad wanaagsan u ah kaaliyaha Apple inuu kaa caawiyo howlahaaga maalinlaha ah.
Muusikada, Kaamirada Remote iyo Remote
Waxaad ka ciyaari kartaa muusikada Apple Watch adoo adeegsanaya qalabka dhegaha loo yaqaan 'Bluetooth' oo aad ugu mahadcelineyso 2GB ee keydinta ee aad ugu deeqi karto tan. Dabcan waad xakameyn kartaa loo maqli karo, sidoo kale waxaad ka ciyaari kartaa muusikada aad ku haysato iPhone-kaaga, in kasta oo xaaladdan ay tahay inaad la qaadato. Qaadashada sawirku waxay noqon doontaa mid aad u fudud mahadnaqa arjiga Kaamerada Fog oo waliba kuu oggolaaneysa waxay soo bandhigi doontaa horudhac ka mid ah si wax walbana loo habeeyo. Remote ayaa kuu oggolaan doonta inaad xakameyso Apple TV-gaaga ama maktabadda Lugood ee ku taal Mac-gaaga ama PC-gaaga.
Waqtiga, Boorsada iyo Sawirada
Cimilada, maadaama aysan si kale noqon karin, waxay ku siin doontaa macluumaad ku saabsan xaaladda hadda jirta ee cimilada iyo sidoo kale saadaasha maalinta oo dhan. Iyada oo qaab aad u asli ah, sida haddii ay tahay saacad, waxaad ka arki kartaa saadaasha maalinlaha ah iyada oo loo marayo astaamaha. Bacda waxba kama waayi doontid wax ku saabsan suuqa saamiyada, sawirradana waxaad ku tusin kartaa saaxiibbadaa sawirrada qoyskaaga shaashadda yar ee Apple Watch halka iPhone 6 Plus-kaaga oo leh 5,5-inch Retina FullHD shaashaddiisa ay nasaneyso jeebkaaga.
Alaarmiga, saacadda saacadda saacadda iyo saacadda
Saacad noocan oo kale ah looma tixgelin karo sida oo kale haddii aysan lahayn a alaarmiga, saacadda saacadaha saacadda iyo saacad, howlaha muhiimka ah ee Apple uusan iska indhatirin.
Saacadda Dunida iyo Dejinta
Waxaan ku dhammeyneynaa Codsiga Saacadda Adduunka, oo aan ku kari karno ogow waqtiga meelo kala duwan oo adduunka ah iyo arjiga Dejinta, oo aan ka kala duwanaan karno howlaha muhiimka u ah Apple Watch-keena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Barnaamijyada Apple Watch
iTunes waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 12.1.2 oo lagu daro taageerada arjiga sawirada iyo horumarin kale
[XALAY] Wax ku iibsiga Aqoonsiga Taabashada ee App Store wuxuu joojiyaa la shaqaynta macruufka 8.3